Reimer Twins - Akụkọ Mmegharị Mmekọahụ nke Horror | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
The Reimer Twins - Akụkọ banyere Mkpesa Mmekọahụ nke Horror
Bruce Reimer na ejima nwoke ya Brian mụrụ na Canada na 1960. Mgbe ha dị ọnwa asaa, ebiri ụmụ nwoke ndị ahụ dị mma bie ugwu. Mana ndị dọkịta jiri usoro ibi ugwu ọhụrụ, gụnyere agịga na-arụ ọkụ eletrik, na Bruce. Ihe ọghọm mere, na-agba ọkụ amụ nwa obere ihe.
Ndị mụrụ ya kpebiri ịkpọrọ Bruce gakwuru Dr. John Money, onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ na ọkà mmụta mmekọrịta nwoke na nwanyị Johns Hopkins ha hụrụ na TV.
Dr. Ego nwere ntụzịaka ewezuga akụkụ ọmụmụ na akwara, okike bụ ihe mmekọrịta ọha na eze. Ruo mgbe ejima Reimer, ọ rụọla ọrụ nke ukwuu site na nsogbu metụtara mmekọrịta - ụmụaka amụrụ akụkụ ọmụmụ amuma ma ọ bụ chromosomes na-enwekarị mmekọahụ.
Ma ejima Reimer - ma ọ bụghị nke ọma ma na-emebi ihe dị ndụ - bụ nnwale zuru oke nke iji nwalee edemede ya banyere ọmụmụ nwanyị. A ga-azụlite Brian mgbe ọ bụ nwa nwoke, a ga-akpọ Bruce ugbu a gaa Brenda, ma zụọ dịka nwa nwanyị.
Reimers kwenyere, ma sie ọnwụ na uwe ụmụ nwanyị na mkpakọrịta maka Brenda n'oge nwata. Ọ dịtụghị mgbe ha gwara ụmụ ejima ahụ ihe mberede ahụ, ma ọ bụ gbasara mmekọahụ nke Brenda.
A kpọtara ejima ya na Dr. Money, onye kpọrọ ya ikpe a bụ ihe ịga nke ọma mgbe ụmụ ejima ahụ gbara afọ itoolu.
O dere, "Onweghị onye ọzọ maara na ọ bụ nwa ahụ nke akwụkwọ ha gụpụtara na mgbasa ozi akụkọ n'oge ihe mberede ahụ,"
“Omume ya na-adịkarị nke obere nwa nwanyị na-eme ihe, ma dị nnọọ iche na nke ụmụ ejima ya na-eto eto, na ọ nweghị ihe ọ bụla ga-eme ka mmadụ chee echiche ya.”
Ihe dọkịta ahụ ekweghị
Ọganiihu na akwụkwọ nke Brenda Reimer dịka ọmarịcha nwa nwanyị mara mma ma na-ahazi na-adabaghị na ndụ nwata ahụ. Brenda Reimer bụ tomboy jupụtara n'ike - ụmụ nwoke na-ezere maka iyi uwe, ụmụ agbọghọ na-ejikwa oke ọhịa.
Ọ na-enupụ isi nke ukwuu. Ọ bụ oke oke, enweghị m ike ịmanye ya ime ihe ọ bụla na nwanyị. Brenda enwechaghị ndị enyi na-etolite. Onye ọ bụla chịrị ya ọchị, na-akpọ nwanyị ya na-achụ nwanyị, ”nne Brenda, Janet, chetara na N'ajụjụ ọnụ. Ma Brenda bụ nwanyị nwere owu na-ama naanị nwanyị.
N'oge nlele na nlele nke ụmụ ejima ahụ, Dr. Money ga-amanye ụmụ ejima ahụ ịgba ọtọ na-egwu egwuregwu mmekọahụ, na-egosipụta ọkwá dị iche iche nke ụdị ha. Otu mgbe, a na-ese foto nwoke a riri.
Ka ọ na-erule afọ iri abụọ, ụmụ ejima ahụ kwụsịrị ịga Dr. Money.
Ka ọ na-erule 13, Brenda na-egbu onwe ya.
Site na 15, ndi Reimers kwụsịrị iwere Dr. Ego ma kpughee eziokwu nye Brenda - ọ bụ nwoke. Ọ nabatara njirimara nwoke ya nke ọma, họrọ aha David, ma bido ịgwọ ọrịa homonụ na ịwughachi akụkụ ịwa ahụ. Ọ na-eme enyi nwanyị wee lụrụ nwanyị, onye ọ mụụrụ ụmụ ya.
Ma ọnya ahụ tara akpụ n’oge nwata ya dị omimi ma David na nwanne ya nwoke. Ha abụọ nwere nkụda mmụọ. Mgbe afọ 14 gasịrị, nwunye Devid gbara ya alụkwaghịm. Ekem Brian ama akpa ke ntak ọkpọsọn̄ ibọk ọnọ enye. N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, na Mee 2004, David gburu onwe ya. Ọ gbara afọ 38.
N'agbanyeghị ihe niile, Dr. Money mgbe ebipụta ọ bụla retractions nke ọmụmụ ya, ma ọ bụ tinye ọ bụla degharịa. N'ihi nke a, a na-ekwukarị ọmụmụ ego Dr. Money dị ka mgbanwe nke nwoke na nwanyị na-aga nke ọma site na obodo ahụike na nnukwu.